Haweeney Isku Dayeysa In ay Qabriga ka Soo Baxdo 11 Maalin ka Dib#Muuqaal | Xaqiiqonews
Haweeney Isku Dayeysa In ay Qabriga ka Soo Baxdo 11 Maalin ka Dib#Muuqaal
Qiso cajiib ah ayaa ka dhacday mid ka mid ah magaalooyinka Dalka Brazil, ka dib markii haweeney La aasay iyadoo nool,-qalad dhacay dartiis-.
Wargeyska Daily Mail ayaa Jimacadii La soo dhaafay sheegay in Rosengella Almeida oo 37 jir ah, ay isku dayday in ay ka soo baxdo Qabriga, ka dib markii lagu aasay qabrigeeda iyado oo wali nool.
Laakin si dhab ah ayey u dhimatay, markii qoyskeeda ay ku dul burburiyeen qabriga, ka dib markii dadka deegaanka ay soo sheegeen in qabriga ka dhax maqleen cod dad qeylinya.
Sheekada Madax wareerka leh ayaa bilaabatay, xilli Meydkeeda loo sii waday Qabriga kolkaasi oo ragga qaarkii ay dareemeen lugaha oo nuuxnuuxsanaya, hase ahaate ma jirin baraarug sare maadaama geerideeda laga soo xaqiijiyey Isbitaalka, waxeyna haweeneydani aheyd mid xaas ah, iyadoo aqal gashay 28 bishii januaray 2018-ka,.
Dad ku nool agagaarka qabuuraha ayaa u sheegay qoyskeeda, in ay maqleen cod meel dheer ah oo ka soo baxaayey gudaha qabriga, 9-kii Feb-maalintaasi oo ku beegan 11 maalin ka dib dhimashadeeda.
Markii la faagay qabrigeeda, waxaa la arkay dhaawacyada jirkeeda, sida gacmaheeda oo garaafeysnaa,wajiga oo dhaawacyo kaga yiileen taasi oo muujineysa in ay u halgantay sidii ay qabriga kaga soo bixi laheyd.
Hooyada dhashay haweeneydan oo lagu magacaabo Germana de Almeida 66 jir ah, ayaa sheegtay in markii ay soo bixiyeen meydka gabadha, jirkeeda ay ku arkeen dhaawacyo aan ku oolin xilligii la aasay.
Germana de Almeida ayaa raacisay “Xitaa waxa ay isku dayday in ay daboolka iska qaato,maxaa yeelay musmaarada qaarkood booskeedi ayey ka baxsanaayeen”.
Arnaldo Mont oo ka tirsan Boliiska ayaa sheegay “Waxaan dhageysanay maanta marqatiga ka socday xubnaha qoyska, waxaana wadnaa baaritaan”
Waxaa uuna intaasi ku daray “hadii ay danta nagu qasabto waxaan baari doonaa meydka Rosengella Almeida, si aan u ogaano wixii dhacay”